सोमवार, आश्विन १२, २०७७ ०७:४६:५६ Monday, 28 September, 2020
सोमवार, आश्विन १२, २०७७ EN
अर्थमन्त्री डा. युवराज खतिवडाले सरकार आफैँले बनाएको कार्यविधि मिचेर अर्बौँ रुपैयाँ रकमान्तर गरेको छ। आफैँले बनाएको नियम मिचेर रकमान्तर गर्दै सरकारले मनपरी खर्च गरेको हो।
अर्थमन्त्रालयको आन्तरिक कार्य निर्देशिकामा जेठपछि रकमान्तर स्वीकृत गर्न नपाइने व्यवस्था गरेको छ। पछिल्लो चार महिनामा मात्रै अर्थ मन्त्रालयले साढे ५० अर्ब रूपैयाँ भन्दा बढीको रकमान्तर गरेको छ। असारमा करिब २० अर्ब रुपैयाँ रकमान्तर गरिएको छ।
त्यस्तै वर्ष अन्त्यमा खर्च गर्ने प्रवृत्ती पनि उस्तै देखिएको छ। यस विषयमा केन्द्रित भएर पूर्व सचिव युवराज भुसालसँग गरिएको कुराकानी:
लामो समय प्रशासन क्षेत्र र त्यसमा पनि योजना आइग र अर्थमन्त्रालयमा बसेर काम गर्नु भयो अन्त्यमा ठूलो रकम रकमान्तर गर्नु पर्ने बाध्यता के पर्छ ?
वर्षको अन्त्यमा खर्च बढी भएपछि हामीले एउटा नियमावली बनाएका थियौ। नियमावली मार्फत पहिलो चौमासिकमा ४० प्रतिशत दोस्रो चौमासिकमा ४० प्रतिशत र तेस्रो चौमासिकमा २० प्रतिशत गरेर जम्मा खर्च गर्ने प्रावधान पनि राखिएको थियो। आर्थिक वर्षको अन्त्यमा असारे विकासमा धेरै गयो र बाटा-घाटाको नाममा रकम बगाउने भयो भनेर त्यस्तो नियम ल्याइएको थियो।
यथार्थमा त तेस्रो चौमासिकमा ८० प्रतिशतसम्म खर्च भएकाे देखिएको छ नी हैनर ?
हामीले अन्तिममा २० प्रतिशत भनेका थियौ यसरी रकम दुरुपयोग हुन्छ भनेर गएका हौ। अहिले अर्थमन्त्रालय समय अनुसार परिमार्जन गर्दै जानु त स्वभाविक हो तर आफैँले बनाएको कार्यविधि आफै उंलघन नगर्नु पर्ने हो। किन भने ठूलो रकम रकमान्तर गर्नु भनेको अन्यत्र खर्च नभएका रकमहरु खर्च हुने ठाउँमा पठाउँने त स्वभाविक रुपमा मिल्छ। यसले अर्थमन्त्रालयको बजेट बाँडफाँटको क्षेमता कमजोर छ भन्ने देखाउछ।
अर्थमन्त्रालयले आफैँ कार्यविधि बनाएर अरूलाई उदाहरण दिनु पर्नेमा आफै कार्यविधि मिच्दा यो अलि राम्रो देखिएन । अहिले झण्डै १० प्रतिशतको हाराहारीमा रकमान्तर हुनु आफैँ पनि राम्रो पक्ष हैन अलिअलि खर्च नभएको रकम एताउता मिलाउँदा खर्च हुने क्षेत्रमा पठाउने सुविधा हुन्छ। यति ठूलो रकम रकमान्तर आर्थिक वर्षको अन्त्यमा आफैले बनाएको कार्यविधिभन्दा बाहिर गएर गर्नु त्यति राम्रो अर्थ लागेको छैन।
बजेट नै धेरै खर्च भएको छैन यसमा अन्तिम सयमा ठूलो बजेट खर्च गर्न पर्ने स्थिति के कारणले बन्छ ?
अन्तिममा खर्च बढ्नुको एउटा कारण कामहरू पहिलेदेखि भएका हुन्छन् र भुक्तानी अन्तिममा हुने भएकोले अन्तिममा खर्च देखिने हो। अन्तिममा सबै खर्च भयो भन्दा पनि पहिले भएको खर्चको भुक्तानी अन्तिममा भएको कारण त्यस्तो देखिन्छ। तर अहिले असार लागेपाछि जेठ भन्दा पहिले रकमान्तर गर्न पाइने छैन भनेर आफैँ कार्यविधी बनाएर असारमा यसरी ठूलो रकम रकमान्तर गर्नु राम्रो हैन।
यस्तै किसिमको अवस्था आयो बजेट पास गर्न ढिला भयो असोजसम्म बजेट छलफल हुने राम्रोसँग कार्यन्वयन भएन भन्ने आधार मै २०५८ सालमा पहिलो पटक जेठ महिनामा बजेट ल्याइएको थियो पछि त्यसलाई अभ्यास गर्ने प्रयास गरियो र अन्तत संविधानमा नै मिति तोकियो। साउन १ गतेदेखि नै काम होस् र बजेट राम्रोसँग खर्च होस् भन्ने किसिमले गरिएको थियो अहिले पनि असर गर्नु पर्ने हो भने त यसले खासै प्रभावकारिता दिए जस्तो देखिदैन।
रकमान्तर त निश्चित क्षेत्रमा खर्च गर्नु पर्ने हो तर यहाँ त गाडी किन्ने र सचिवालय सझाउन पनि रकमान्तर गरेर रकम लैजाने गरेको देखियो ?
रकमान्तर गर्ने भनेको तेस्रो चौमासिककोसम्म खर्च नहुने भयो अथवा कोही ठाउँमा खर्च नहुने भयो कोही ठाउँमा खर्च नपुग्ने भयो भने रकमान्तर गरिन्छ। चैत बैशाखमा रकमान्तर गर्नु मनासिव जस्तै नै दखिन्छ।
तर, पछिल्लो समयमा गाडी किन्ने कम्प्युटर किन्ने कार्यालय सजाउने सोफा किन्ने पर्दा किन्ने तथाकथित पूँजीगत खर्च भनिएको छ। त्यो पूँजिगत नभएर अपरेशनल खर्च मात्रै हो। त्यसमा खर्च गर्नु राम्रो हैन। जिल्लातिर जाने अथवा बाहिर गरिने खर्चहरू पनि त्यस बेला बाटा-घाटा खन्‍ने कुराहरू देखिएको हुनाले त्यसको प्रभावकारीता देखिएको छैन। सरकार यसमा अलि गम्भिर भएर यसको जडसम्म पुगेर स्थायी रुपमा गर्नु पर्छ।
अहिले दुई/तिहाई यति बलियो सरकार भएको बेला बलियो सरकार सरकारले राम्रा राम्रा स्ट्यान्डरहरू स्थापित गर्नु पर्छ। परम्परागत शैलीमा जाने हो भने त सामान्य बहुमतको र अस्थायी सरकामा के अन्तर हुन्छ। र यस्तो बलियो सरकारले स्ट्यान्डर सेट गर्दै जाने र अरुलाई पनि उदाहरण बन्ने गर्नु पर्छ।
अहिले कतिपय विषयमा खर्च कटौतिको लागि सार्वजनिक खर्च पुनारावलोकन आयोगले सुझाव दिएको थियो त्यो विषय पनि गुपचुप राखिएको छ अहिले सरकारले सुधार गर्न पर्ने ठाँउ कहाँ देख्नुहुन्छ ?
२०५७ सालमा नै सरकारले सार्वजनिक खर्च पुनरावलोकन आयोग गठन गरिएको थियो। त्यसमा सदस्य सचिव भएर मैल पनि काम गरेको थिए। त्यसमा धेरै कामहरू अघि सारेका थियौ केही कार्यान्वयन पनि भएका हुन्।
अहिले पछिल्लो डिल्ली खनालको आयोगको सार्वजनिक गर्दा राम्रो हुन्छ। प्रतिवेदनलाई सरकारले सहर्ष स्वीकार गर्ने र त्यसैको सिफारिस अनुार गर्दा सरकारलाई बढी सहज हुन्छ। आयोगको सिफारिस अनुसार काम गरेको छ भनेर देखाउँदा राम्रो हुन्छ।
त्यसमा पनि केही सुधार गर्नु पर्ने कुरा रहेछ भने अभ्यास गर्न थालेपछि बल्ल सुधारको झलक हुन्छ। अहिलेलाई सरकारले जुन आँफै गठन गरेको आयोग हो त्यो सिफारिस गरेको प्रतिवेदनलाई कार्यान्वयन गर्नु नै हाम्रो हुन्छ जस्तो लाग्छ।
प्रकाशित मिति: शनिवार, श्रावण ११, २०७६, १०:०७:००
प्रधानसेनापति थापा सेल्फ क्वारेन्टाइनमा आइतवार, आश्विन ११, २०७७ -->
लकडाउन गर्न जानेको सरकारले राहत दिन जानेन News Missile
प्रहरीको आचरण सुधार गर्न ‘आचारसंहिता’ बिहिवार, आश्विन १, २०७७